ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ - Worldwide ဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-02 > ကျနော်တို့တစ်ဦးတည်းမဟုတ်
လူတွေကတစ်ယောက်တည်းနေမှာကိုကြောက်ကြတယ်။ ထို့ကြောင့်ထောင်များ၌တစ် ဦး တည်းချုပ်နှောင်ခြင်းကိုအဆိုးရွားဆုံးပြစ်ဒဏ်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ စိတ်ပညာရှင်တွေကတစ်ယောက်တည်းနေမှာကိုကြောက်တာကလူတွေကိုလုံခြုံမှုမရှိ၊
Gott der Vater wusste davon und versicherte deshalb den Menschen immer wieder, dass sie nicht allein sind. Er war mit ihnen (Jesaja 43,1-3), er half ihnen (Jesaja 41,10) und er würde sie nicht verlassen (5. မောရှေ ၁1,6). Die Nachricht war eindeutig: Wir sind nicht allein.
Um diese Botschaft zu unterstreichen, schickte Gott seinen Sohn Jesus auf die Erde. Jesus brachte nicht nur Heilung und Errettung in eine zerbrochene Welt, sondern war einer von uns. Er verstand aus erster Hand, was wir durchmachten, weil er unter uns lebte (Hebräer 4,15). Die Nachricht war eindeutig: Wir sind nicht allein.
Als die von Gott bestimmte Zeit kam, in der Jesus sein irdisches Wirken am Kreuz zu Ende führte, wollte Jesus seine Jünger wissen lassen, dass sie nicht allein sind, auch wenn er sie verlassen würde (Johannes 14,15-21). Der Heilige Geist würde diese Nachricht noch einmal untermauern: Wir sind nicht allein.
ခမည်းတော်၊ သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားခံယူပြီး၊ သူတို့သည်ဘုရားသခင့်ပြင်ဆင်ပေးမှုတွင်ပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုတစ်ယောက်တည်းနေရန်မကြောက်သင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအာမခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွာရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်ခွဲနေခြင်းကိုဖြတ်သန်းနေရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယိုယွင်းကျလာပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ဆုံးရှုံးခဲ့ရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချည်းနှီးဖြစ်ပြီးအထီးကျန်သည်ဟုခံစားရပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။
မှားယွင်းသောကောလာဟလများကြောင့်လူတိုင်းကိုဆန့်ကျင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ပါ။ အလုပ်မရှိတဲ့အတွက်အသုံးမကျဘူး၊ အသုံးမကျဘူးလို့ခံစားရရင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူအတွက်မှားယွင်းသောရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဟုအခြားသူများကဆိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နားလည်မှုလွဲနေသည်ဟုခံစားရပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ ဖျားနာနေလို့အားနည်းပြီးအကူအညီမဲ့တယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဟာပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ပျက်ကွက်တယ်လို့ခံစားမိရင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။ ဤလောက၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်လေးလံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားရပါကကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။
Die Dinge dieser Welt können uns überwältigen, aber der Vater, Sohn und Heilige Geist sind immer an unserer Seite. Sie sind nicht da, um unsere schwierigen Umstände von uns zu nehmen, sondern um uns zu versichern, dass wir nicht allein sind, unabhängig davon, durch welche Täler wir gehen müssen. Sie leiten, führen, tragen, stärken, verstehen, trösten, ermutigen, beraten uns und gehen jeden Schritt unserer Lebensreise mit uns. Sie werden ihre Hand nicht von uns abtun und uns nicht verlassen. Der Heilige Geist lebt in uns und deshalb müssen wir uns niemals einsam fühlen (1. ကောရိန္သု 6,19), denn: ငါတို့တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။
ဘာဘရာ Dahlgren ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်